I-Brush Nickel Gooseneck Ikhishi Lompompi
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 41 izilinganiso ikhasimende
Isikebhe sokudla ekhishini seGooseneck se-WOWOW sinezinketho eziningi zokusebenzelana. Izinto ezisezingeni eliphakeme zokusebenza kahle. Iwaranti yeminyaka engu-5. Thenga isikebhe sethu sokukhishini se-gooseneck manje!
I-Gooseneck Ikhishi Lombhobho 2311701
Njengoba ikhwalithi yekhishi le-gooseneck ekhishini le-WOWOW lingaphikiswa, isilinganiso sekhwalithi yaleli faucet ekhishini eliphezulu le-arc lihamba phambili ozothola emakethe. Ngoba i-WOWOW isebenzisa kuphela amasu wokukhiqiza amasha ngezinqubo ezisebenza kakhulu, singanikeza lesi isikulufu sokudla ekhishini se-gooseneck ngentengo ebiza kakhulu. Isikebhe ekhishini kwesinye isikhathi yinto yokugcina ethengwa ikhishi elisanda kuklanywa. Ngakho-ke, imishini yokususa ekhishini imvamisa kungukungena kokuvala kwesabelomali sekhishi okuphelele, lapho imingcele yalesi sabelomali sivame ukusondela noma kufinyelelwe. Ngakho-ke kuhle ukwazi ukuthi usengathola isikulufu esikhudlwana sekhishini esezingeni eliphezulu ngesabelomali esilinganiselwe.
· Idizayini eyingqayizivele
· I-Nozzle ehlanganisiwe yokudonsa ngaphandle
· Hlanganisa isitayela ngokusebenza okuphezulu
SKU: 2311701 Categories: Ikhishi Faucets, Donsela Phansi Oompompi Bekhishi Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Donsela Phansi, fafaza
Ubuhle bami lokhu kwenziwe kahle futhi kwaklanywa kahle kangaka, kuqinile futhi ingcindezi yamanzi ingcono kuneDelta endala eyishintshile, bekuxwaya ukuthenga umkhiqizo, kepha le ngcezu ingcono kakhulu futhi nekhwalithi ivelele, mina Ngizothenga bonke ompompi bami kubo esikhathini esizayo, ngizoba nemibhobho yokugezela emi-2 ngokulandelana ngiyithandile kakhulu le Khishi, nakanjani ngizoncoma kunoma ngubani ofuna ukufaka izinto zakudala ngalezi, okuyifanele imali leyo.
Yize bengiphatheke kabi ukuvalelisa umpompi wami wokuqala we-MC, lokhu kuqinisekile ukuthi ubuhle! Ngiyakuthanda ukuthi baze banikeze amagilavu ​​akhethekile wokufaka ukuze ungaphazamisi i-chrome
Esabelomali lokhu kuyifanele imali! Bekulula KAKHULU ukufaka (ukukhipha endala yethu bekungolunye udaba). Ngizokhuluma nge-hose retracts ngesisindo esinzima kakhulu, esinamathiselwe kahle ekugcineni kwepayipi ngaphansi kukasinki.
- Umfutho wamanzi omuhle kakhulu
- Ukusebenza okubushelelezi kwesibambo ne-hose
- I-Hose ihlehla kahle futhi ibuyele ukuqala isikhundla
- Isisekelo samboza ngokuphelele izimbobo zokuqala zamashoboshi amanzi ashisayo / abandayo
- 3 izilungiselelo ezahlukene spray phezu hose nge inkinobho stop esheshayo
- Iyakwazi ukufaka i-Ball Canning Pot ngaphansi kwayo kalula noma ingayishiya ekhawunteni bese isebenzisa ipayipi ukuyigcwalisa.
- Awukakayitholi okwamanje.
Ifanele imali uma ufuna ompompi abanesitayela ngokugqekeza ibhange. Ncoma kakhulu lena!
VELE ufake le ompompi esakhiweni sethu sangemva kwesikole. LILULA leli gama! Kwakudingeka kuphela amathuluzi ama-2 nethawula. Ngifakile ompompi eklanywe ngokufanayo futhi lena ibukeka futhi izwa kamnandi. Iqinile futhi ayikho ukuvuza
Sifanele ukujwayela izinkinobho zokugeleza kwamanzi ukuze isibambo sokudonsa sitholakale ngemuva kwesibambo (sibheke ompompi kunokuba sibhekane nathi). Ngiyayithola, sebenzisa iminwe yakho kunesithupha sakho ukushintsha kusuka ekusakazweni uye kufafaza. Sizobona ukuthi ngabe wonke umuntu esakhiweni uzoqinisekisa yini ukuthi isibambo siyabuyiselwa entanyeni kunokuba asishiye silenga.
Ngiqaphele into eyodwa encane engafanele inkanyezi… Inkinobho encane eluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu esbambeni isemuva. (Bheka isithombe sokuqala ngezansi. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kwesobunxele yipompi yokuqala. Umpompi ongakwesokudla umpompi omusha) Ngokuvamile umbala obomvu ungakwesokudla bese kuthi okwesibhakabhaka kube ngakwesobunxele amanzi abandayo ashisayo. Ngizamile ukuvula inkinobho kodwa ngabona ukuthi ibingagudluki. Akunankinga, ngivele ngenza isiqiniseko sokuthi amapayipi amataniswa nenkinobho futhi ngizokwazisa abasebenzi bami.
Lokhu ukubonakala kwami ​​ngemuva kokufaka nokusebenzisa lokhu usuku olulodwa.
ukukhipha i -boxing:
Ukudonsa lokhu ngaphandle kwebhokisi kuzwakale kuqinile, futhi kubukeka kukuhle. Beyipakishwe kahle, futhi ibingenazo izimpawu zokulimala komkhumbi.
Ngikwazile ukufaka lokhu kalula ngopende nje, kanye nomshayeli wesikulufu sePhilips. Imiyalo icace ngokwanele, futhi angibanga nankinga ngokufaka kwangempela. Inkinga okungahle kube yiyo kuphela bekuyinto encane enemiyalo. Imiyalo ikhombisa ukuthi kufanele ubeke ompompi emgodini okhuphukayo kusinki (Ngokuzithandela kufaka i-bezel yamasinki amathathu emigodi), bese kuthi ngaphansi, ufake i-washer yepulasitiki, i-washer yensimbi, ne-nut enkulu. Lokho okungakhombisi ukuthi kukhona indandatho engu-O edinga ukuya esiqwini sompompi ngaphambi kokuba ifakwe emgodini okhuphukayo noma ebhaleni. Lokhu bekungekho nzima ukukuthola, kepha kungaba nokudideka okuncane.
Sekukonke ngikwazile ukukhipha ompompi wakudala ngafaka entsha esikhathini esingaphansi kwehora.
Ngijabule kakhulu ukuthi le ompompi isebenza kanjani. Isibambo sizizwa sibushelelezi futhi siqinile ukusebenza futhi angibanga nankinga yokukulungisa kubungako bokushisa nokugeleza engikufunayo. Izinkinobho zokukhetha ukufafaza zisebenza kahle. Ukulungiselelwa kwesifutho kunamandla impela, okulungele ukuhlanzwa. Umpompi uzizwa uqinile futhi umbhobho wokudonsa usebenza kahle futhi ubuya ngaphandle kwezinkinga. Le ompompi ibuye ibukeke kahle futhi ifana nosinki ongenasici obhulashiwe ngiyibeke kahle.
Ezinye izikhalazo ezincane kakhulu:
Ukulungisa izinga lokushisa ngenkathi amanzi evulekile kuzwakala kunzima nje. Akunzima, kepha akulungile.
Ekuhlelweni kwesifutho, lapho amanzi evuleke yonke indlela kungenzeka aqine kakhulu, futhi inkungu / isifutho esikhanyayo sizophuma kusinki.
Inkinobho yokukhetha imodi yokufafaza inokuthinta okulula kakhulu. Bengizokhetha kungcono ukuthatha ingcindezi ethe xaxa yokushintsha imodi.
Ngicabanga ukuthi lena ompompi abahle kakhulu, futhi ibonakala ifana nezinye ezibiza imali ephindwe kane. Ilifanele inani futhi ifanelwe isilinganiso sezinkanyezi ezinhlanu.
Wow umkhiqizo omuhle kakhulu wentengo. Uma kuqhathaniswa ompompi abafanayo kwaLowe nakubo babephindwe kabili intengo. Kulula ukufaka kwafika nakho konke okudingekayo. Ngingawuncoma kakhulu lo mkhiqizo.
Ngiyabonga nkosikazi ujabule kakhulu!
NGIYAYITHANDA le ompompi. Sasuka kusinki woqweqwe lwawo ovalwe ngopende ngompompi we-nickel owawungowokuqala endlini yethu yama-1950 futhi sawufaka esikhundleni salokhu. Ngangifuna eyodwa kuphela ephethwe nayo eyayifafaza. Kubukeka kukuhle ekulungisweni kabusha kwekhishi okuqhubekayo futhi kusebenza kahle! Asinawo umfutho omkhulu wamanzi, kepha lokhu kusenamandla amakhulu, ikakhulukazi uma unawo kufafaza esikhundleni somfudlana. Umyeni wami wayifaka ngaphandle kwenkinga futhi akakaze akwenze phambilini.
Umpompi wakudala wasekhishini wawuphuma amanzi, waqale wazama ukufaka i-epoxy ezungeze indawo evuzayo, wehluleka ukulungisa inkinga, wanquma ukuthenga umpompi omusha ozothatha indawo yepompo evuzayo.
Le ndlu iyindawo eqashisayo, ayinakuthethelela ukuchitha u- $ 200 ukuthola i-delta / moen, iseshwe ku-wowow, ekugcineni ithathe isinqumo sokuthola lesi sisekelo esisodwa kuzibuyekezo nentengo.
Ungithathe cishe ihora ukususa ompompi wakudala bese ufaka entsha. Umpompi uqobo ubonakala wenziwe kahle, iziyalo bezicacile. Ngemuva kokuyifaka, uvule / uvale ompompi, usebenze ngendlela obekulindelwe ngayo, akukho ukuvuza. Sethemba ukuthi le ompompi ihlala kanjena isikhathi eside. Ngijabule kakhulu ngokuthengwa.
Lapho ngithenga ikhaya elineminyaka engama-80 ubudala, ngangazi ukuthi ngangizodinga ukufaka okunye esikhundleni sezinto ezimbalwa, ikakhulukazi ompompi wakudala wasekhishini.
Umpompi wokuqala wawufakwe ngokungafanele, ngakho-ke izinkinobho zamanzi abandayo / ezishisayo zazibhalwe ukuthi azilungile. Futhi ibinengcindezi embi yamanzi kanti nesifutho asisasebenzi. Ngemuva kwamasonto ambalwa ngihambile, nginqume ukuthi ukufaka ipayipi kuzoba iphrojekthi yami elandelayo.
Ngithenge le ompompi entsha ngemuva kokubheka abanye ezitolo ezithuthukisa ikhaya nokufunda izibuyekezo. Lokhu nakanjani akuzange kudumaze.
Kwathi lapho kukhishwa ompompi wakudala, ukufaka lokhu kwakuwumoya futhi kwathatha isikhathi esingaphansi kwengxenye yehora. Ngibe sengibuyisela emuva amanzi ukuze ngiwahlole futhi ngazithukuthelela ngokuthi angisheshe ngithenge lokhu. Ingcindezi yami yamanzi ibingabuyeli kokujwayelekile kuphela, amalebula ashisayo nabandayo ekugcineni abhalwe ngokufanele futhi ukusebenza kwesifutho kwabuyiselwa ngokuphelele.
Kukonke, ngijabule kakhulu ngokuthenga kwami ​​- lokhu kungenye yezinto “engizithuthukisile” engizithandayo engizenzile ekhaya lami okwamanje!
Kufakwe isibambo esisodwa esidala, imbobo eyodwa yafakwa le. Yonke into ilingana kahle futhi kumangaze ukuthi ifike ngamapayipi alukiwe ashisayo nabandayo abambeke ngqo ekuxhumaneni kwami ​​kwe-valve okujwayelekile. I-hose ye-sprayer iyashesha-xhuma bese iyaqhuma khona kanye. Ngithole ukuvuza okungu-zero kuqala. Amathuluzi adingekayo: shayela umshayeli nesipikili esincane ukuqinisa i-nut emapayipini afana ne-pliers noma i-crescent wrench. Ukufakwa okulula kakhulu. Ukube bengiwuplamba ngangiwathenga amashumi ambalwa alawa bese ngiwagcina elolini lami. Ikhasimende lizokhokha u- $ 150 ngalo futhi lijabule.
Okokuqala kwangimangaza ukuthi ipayipi lifike kahle kanjani nokuthi libukeka lihle kanjani. Kwakufana nethuluzi elihle lapho uvula ibhokisi bese ulibona okokuqala. Sifake lena kubhavu wethu wokuphatha wohlobo lwakudala ompompi abancane obekunzima kakhulu ngaphansi ngenxa yesikhala esincanyana sokuthola isamba esisezansi - bekufanele sigijime esitolo sehadiwe ukuthola okuthile okuhlukile okungazange kushaye izinhlangothi ubhavu. Ngingaphakamisa ukuthi inkampani ifake i-spin kokugcina noma yenze ukuthi itholakale ngokufana naleyo esetshenziswe emaphepheni ohlobo lwemigodi emi-2. Besifuna ukuthi isifutho sigeze inja futhi bonke abanye ompompi abanesifutho esilingana nalolu hlobo benziwe ngentengo ephansi kakhulu besicabanga ukuthi sizozama lokhu. Lokhu kufakwe izolo komunye wemigodi (ehambelana kahle nezintambo ezihamba ngayo futhi sizothola ipulagi lomgodi osele noma sifake isepha yokuhambisa). Isikhathi sizotshela njengoba sisetshenziswa ukuthi sibambelela kanjani kodwa siyajabula ngomkhiqizo!
Ngithanda yonke into ngale ompompi. Ayibizi kakhulu kepha ibiza imali ngokuqinisekile! I-hose uqobo luyangena ngokushelela ngaphandle nangaphakathi futhi futhi lide kakhulu futhi. Ngakho-ke kukhululekile ukugeza noma iziphi izitsha nokukugeza ucwile ngemuva kwalokho!
Ngidinga ukushintsha ompompi wami wakudala wasekhishini, benginentshisekelo kulokhu kwaklanywa kompompi, i-WOWOW ayidumile ngokwanele, kepha intengo yinhle, ngakho-ke ngathenga ngaphandle kokungabaza. Umyeni wami ulandele imiyalo yokufaka, futhi angaqeda ngisho nangaphandle kosizo lomunye umuntu! Kusebenza kahle, ukugeleza, isibambo, isipreyi sokukhipha, konke kuhle! Isivumelwano esanelisa kakhulu!
Izinhlobo ezifanayo zompompi zithengisa izikhathi eziphindwe kathathu kunentengo ezitolo zokuthuthukisa ikhaya. Ngangikhathele ngenxa yalokhu, kepha ngijabule kakhulu ngalokhu kuthenga. Ingcindezi yamanzi iphelele futhi isipikili sokudonsa sisebenza kahle futhi sihlehla ngokuphelele. Angikholwa ikhwalithi yentengo !!!
QAPHELA: Ngemuva kokusebenzisa lokhu izinyanga ezimbalwa kufanele ngithi ngijabule kakhulu ngalo mkhiqizo. Izizwa iqinile futhi isezingeni futhi isebenza ngokungenaphutha. Benginokukhathazeka okuthile ngoba kube nokubuyekezwa okumbalwa lapho abanye bephikisana nokuthi ikhanda lokufafaza lenze kanjani (noma lalingazange) lihlehle futhi lihlale endaweni kodwa angibanga nankinga isisindo senza umsebenzi omuhle wokusihoxisa futhi sifanelana nalapho kumele. Le mpompi enhle njenganoma iyiphi engiyibonile ebiza kabili nangaphezulu.
Kubukeka kusabeka, kusebenza kahle futhi bekuyimizuzu emihlanu ukufaka. Izitayela ezinhle kakhulu, ezibukeka kahle, zekhwalithi
Okunye ukubuyekezwa kuphawula ukuthi ukumakwa okushisayo nokubandayo ompompi kubeka okushisayo ngakwesokunene kokujikeleza kokulawula, lapho ompompi abaningi baseMelika bebeka okushisayo ngakwesobunxele. Akubalulekile ngempela, ukumakwa kucace ngokwanele futhi kuthathwe yonke imizuzu eyishumi nanhlanu ukujwayela. Kodwa-ke uma ubeka isigwedlo ngasohlangothini lwesokunene njengoba kwenza iningi kusuke kushisa emuva futhi kubanda ngaphambili okuyisinqumo esihle. Kepha uma kubaluleke ngempela ungaguqula ukuxhuma kwemigqa (noma ngabe-ke inkomba encane enombhalo izobe ingalungile. Ngincamela ukuthi inkomba ibe ilungile uma isivakashi singaboni ukuthi sisebenza kanjani…)
Ukuphikisa kwami ​​kwangempela intengo iyaqhubeka yehla futhi ngikhokhe imali ethe xaxa kepha hheyi, inani elibandakanyekayo selivele lincane kakhulu kulolu hlobo lwompompi… bekuyinto enkulu ngentengo engiyikhokhile futhi kungenzeka kube yinto enhle kuwe .
Le ompompi yaguqula usinki, ubukeka umuhle, kulula kakhulu ukuyihlanza, iminwe yeminwe mahhala, isebenza kahle, inconywe ngokuphelele!
Sengibe nalokhu izinyanga ezimbalwa manje futhi kufanele ngithi, kudlule engikulindele ngentengo ekhokhiwe. Kubukeka kukuhle futhi kusebenza kahle. Ngijabule ngokuthenga kwami!
Kulula kakhulu ukufaka. Isinki sesinki asidingeki, isikulufa nje esiphakathi nendawo esikulayini se-Phillips head screwdriver (okude kube lula) futhi sisebenzisa amapayipi wokuxhuma we-hose. Kuthathwe yonke imizuzu engama-20 ukuyifaka lapho endala isiphumile. Lokhu bekungukuthenga okuhle futhi kubukeka kukuhle!
Kuthengwe le ompompi kancane kakhulu kunombhobho ofanayo kungaba esitolo esikhulu sebhokisi. Umpompi wakudala wawusuba mnyama futhi kwakunzima ukugcwalisa izimbiza zamanzi. Ukufakwa kwakulula futhi akuzange kuthathe isikhathi esiningi. Ngingayincoma le ompompi kunoma ngubani ocabanga ukuyithenga.
Lokhu kungumsebenzi wobuciko kumthengi okhethayo. Ngeke udumale kulokhu kuthenga. Ngifunde lezi zibuyekezo kuqala. Ividiyo nentokazi edonsa kuyo ingafakiwe iyahlekisa njengaleyo engiyitholile. Umuntu ophambi kwami ​​wayefake ngaphansi kwepuleti lokuphikisa kulayini wokuphakela kuqala hhayi ngenkathi ngaphansi kosinki futhi ngakuthola kanjena. Bekufanele ngiyisuse. Abanye abantu abanakho ukuqonda okuvamile kwesinye isikhathi. Ibifakwe ngemizuzu engu-15. Ihlehla njengoba kufanele ngesisindo esifakwe ngqo kuthegi elibomvu elithi "isisindo" futhi awusiqinisi yonke indlela noma ubuzosikhipha. Lokhu kwenzelwa abantu abathanda izinto ezinhle ekhishini labo, ikakhulukazi ezingenazinsimbi futhi bayazesula ngemuva kokuphela kokusetshenziswa ngakunye. Bathanda ukugcina ukuphela kwesibuko kukho konke. Lokhu ngokwakho. Jabulela.
Lena ompompi emangalisayo kuze kube manje. I-hose iyaguquguquka futhi ibonakala yakhiwe kahle. Umpompi kwakulula ukuwufaka futhi ubukeka umuhle ngokwakhiwa kwentamo yehansi. Sikuthengile lokhu ukufaka okunye okudala okwaphuka futhi asidumele nakancane. Ngiyethemba ukuthi ihlala iminyaka eminingi. Kuyathokozisa ukufika ekubukekeni kwesiliva okuxutshiwe okufana nayo yonke eminye imishini yethu.
Lompompi muhle! Umyeni wami akabanga nankinga yokuyifaka. Yeka umkhiqizo omuhle wemali. Kubukeka sengathi kubiza kakhulu kunalokho ebikwenza. Ngincoma kakhulu!
Thanda le ompompi. Okuwukuphela kwesici engifisa ukuthi sibe naso ukucisha isifutho lapho ipayipi licisha. Kufanele uyishintshe ngesandla ukuze ubuyele ekusakazweni okujwayelekile kungenjalo kuzohlala ku-sprayer
Kulula kakhulu ukufaka nekhwalithi enhle futhi. Kuthathe imizuzu eyi-12 ukukhipha ompompi wakudala ukuyishutheka ngaphakathi. Le ompompi iyinsimbi esindayo. Ngiye esitolo esikhulu sehhovisi lebhokisi futhi ngafanisa. Lokhu kuqhathaniswa kahle nalabo ababiza imali ephindwe kathathu noma kane. Ngikude nochwepheshe kepha ngifaka lokhu ngaphandle kwezinkinga. Ngikufisela inhlanhla.
Ngiku-ode lokhu nginovalo oluncane ngoba izindleko bezingaphansi kakhulu kweminye imikhiqizo eqhathaniswayo, kepha ngokuya ngezibuyekezo ebengicabanga ukuthi ziyifanele ingozi leyo. Senginayo manje isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezimbili futhi ngiyayithanda ngempela! Iqinile, izinkinobho kulula ukuzulazula futhi ngiyasithanda isici “sokumisa isikhashana” sokugcwalisa izimbiza, njll Okuwukuphela kokungekuhle engikutholile ukuthi ipayipi alihambisani nezimo njengompompi wokugcina enganginawo; lokhu akusho ukuthi kuqinile, kepha awukwazi ukukugoba kube “u” noma yini. Ngingayincoma le nto ngokususelwa kokuhlangenwe nakho kwami ​​kuze kube manje!
Ngazifaka lokhu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, futhi kuze kube manje, asikaze sibe nokuvuza, izindawo ezigqwalile noma olunye uhlobo lomonakalo. Luhlobo olusindayo futhi lubukeka luthambile uma usebenzisa isibambo, kepha asibanga nezinkinga ngalo. It is a ompompi eshibhile, ngakho-ke ngicabanga ukuthi lokho kusho ikhwalithi ephansi kunezimpawu ezingamakhulu amadola, kepha lokhu kuyindlela enhle, ehloniphekile yokukhetha thina. Bekufanele sithenge i-baseplate ukuze sihambe nayo, okubukeka sengathi kufanele ifakwe, kepha lokho bekungeyona into enkulu kithina. Ukuthenga okuhle.
Bengilokhu ngisebenzisa lokhu isonto lonke. Kushintshwe ipayipi likaMoen elingu- $ 200.00 ebelineminyaka emi-2 kuphela ubudala futhi libe nezinkinga eziningi ngalo. Le bekulula kakhulu ukuyifaka. Imnandi njengeMoen. Ukuphela kwento engingayithandi kodwa engingayijwayela, ikhanda lepayipi linenothi kulo ukuze kuthi lapho liphinda libuyele engxenyeni enkulu yompompi, kufanele libe yisikwele kwesinye isikhathi futhi bese iphumela ngaphandle kancane. Kulula ngokwanele ukuyilungisa ngokusonteka kancane. Ngiyabona ukuthi kungani bakwenze lokhu, ukuze kuthi lapho kusendaweni ukuguqulwa phakathi kwezinhlobo zemifudlana yamanzi kubheke emuva lapho kungabonakali khona. Thenga kakhulu!
Bengifuna ukufaka umpompi wethu wasekhishini njengoba indala ibisineminyaka engaphezu kwengama-20 ubudala. Ngiqale ngokuqhathanisa ukuyothenga ezitolo ezimbili ezinkulu ezithuthukisa ikhaya lapho ngithole ukuthi ompompi bazo “abanobhajethi” babezungeze u- $ 90 ngezinto engangizifuna. Nginqume ukubona ukuthi yimaphi amadili engingawathola ku-inthanethi.
Le ompompi iyesabeka, futhi ilula kakhulu ukuyifaka. Empeleni kungithathe isikhathi esiningi ukukhipha ompompi wakudala kunokufaka okusha. Imigqa yokuhambisa amanzi yayinde ngokwanele, izingqinamba zero kulokho ngaphambili. Ngokuqondene namathuluzi wokufaka, engangikudinga nje kwakuyi-screwdriver ye-Phillips kanye ne-5/8 w evulekile. Ngokuqondene namathuluzi adingekayo okususa ompompi wakudala, bekufanele ngimbambe isondo lami elisikiwe ngenxa yokhololo ongaphansi kukasinki obugqekeziwe kakhulu.
Ukulingana nokuqedwa kwale ompompi kufana ncamashi nalokho engingakuthola ezitolo zendawo. Izinto ezibonakalayo zibonakala zisezingeni eliphakeme, futhi ukusebenza kuhle. Kulabo abangaba nezinkinga lapho ikhanda lingabuyeli ekhaya ngemuva kokulikhipha, kukhona ukulungiswa okulula. Hambisa isisindo sokubuyisa up hose amasentimitha ambalwa ngakho-ke awuphazamisi amanye amapayipi. Isisindo sinzima ngokwanele ukugcina ikhanda le-sprayer lisendaweni ngaphandle kukazibuthe, futhi lisenza kahle. Ngeke nginqikaze ukuthenga enye ompompi kaWOWOW noma ngiyincome kubangani noma kosonkontileka.
Ngiyithengile le ompompi ngoba umkami noma indodakazi yami bayiphulile le eshibhile ebisendlini yami ngesikhathi ngiyithenga, akekho kubo ozovuma. Isinki iqinile, yonke insimbi, futhi kulula ukuyifaka. Ngiyangabaza ukuthi noma ngubani uzoyiphula noma kunini. Bekufanele ngithenge amapayipi nama-adaptha ukufinyelela nokuxhuma kulayini wami wamanzi kepha kusebenza kahle!
Ake ngiqale ngokusho ukuthi le kwakuyimpompi elula yasekhishini yokufaka njalo. Bengilokhu ngenza ukufakwa kompompi iminyaka eminingi futhi ngiwuplamba. Umpompi uza nakho konke okudingekayo ukufakwa okujwayelekile futhi uza namaphayiphu okuhambisa amanzi amade athe xaxa. Lezi zingisizile ngoba ivalve yokuhambisa amanzi ashisayo ibifakwe kakhulu futhi bengingaqiniseki ukuthi izofinyelela? kodwa ngemuva kokubamba umpompi osinkini ngikwazile ukuxhuma ipayipi lamanzi ashisayo cishe ne-intshi ukuligcina. Ikhithi iza neziphendukezeli ezimbili zokuhlinzekwa kwe-valve ukusuka ku-1/2 ″ kuye ku-3/8 ″ ukuxhumeka nje lapho ama-valve akhona angasethelwe ukuxhumeka kumaphayiphu amasha wokunikezela we-3/8. Imiyalo yokufaka ibilula kakhulu ukulandela igxathu negxathu. Esinye sezinyathelo bekuwukukhipha ipayipi lokuphakela ekhanda leprefet spray ngaphambi kokuxhuma isixhumi esisheshayo sokuxhuma. Ngeqe lesi sinyathelo ngoba bengivele ngikhiphe amanzi akhona ashisayo nabandayo ebhakedeni ukuze ngisuse noma imuphi udoti ngaphambi kokuqala ukufakwa kompompi omusha. Le ompompi isebenza ngokumangalisayo futhi iyinani elikhulu kangako lepayipi lekhwalithi elicolekileyo. Ngikhokhe ama- $ 200 edepho yasekhaya ngepompo ebingafaniswa nalena kodwa okunzima kakhulu ukuyifaka, ubuciko obusezingeni eliphansi futhi ngafika namapayipi okuhambisa amafushane kakhulu. Ngingadinga ukuxhuma amapayipi amabili ukuze ngifinyelele ku-valve yokuphakela amanzi ashisayo kakhulu futhi yini eza nombhobho wedepho lasekhaya. Ngijabule kakhulu ngokuthenga kwami ​​futhi ngihlela uku-oda enye ompompi maduzane ngokunye ukuqasha kwami.
Umpompi ubukeka kahle kakhulu futhi usebenza kahle. Imiyalo yayimihle futhi ukufakwa kwakulula.
Ezinye izinto engizitholile:
* Khipha ispout ngepulasitiki ngenkathi ompompi bensimbi. Lokhu kubukeka kukujwayelekile impela kompompi futhi mhlawumbe kunikezwe kuleli phuzu lentengo. I-hose yokukhipha nayo ayiyona insimbi. Ngiyethemba kuphela ukuthi lezi zingxenye zizama ukuhlolwa kwesikhathi nokusetshenziswa kwazo.
* Kukhona i-rocker switch elawula ukusakazwa kwe-spray vs. Kubukeka sengathi uhlala endaweni yokugcina oyishiya kuyo. (Oompompi abaningi engibabonile badinga ukuthi amanzi abe khona ukugcina umsebenzi wokufafaza). Inkinobho “yokumisa isikhashana” iyisici esihle sokusebenza kwesandla esisodwa ngenkathi uphethe izitsha noma amapani ngesinye isandla. Isifutho sinamandla.
* Kunesisindo sokugcina ipayipi lokukhipha ilambu lisendaweni. Lokhu akunakusebenziseka kimi njengoba nginemigqa eminingi kakhulu namapayipi nama-valve okuvala endleleni. Angikwazi ukudonsa ispout ngaphezu kwamasentimitha ayi-10 ngaphandle kwesisindo sokumelana nokuthize. Uma indawo yakho engaphansi komhlaba iminyene, lokhu kuyinto okufanele uyicabangele. Ngenhlanhla umpompi wami ophumayo wawunomthombo engikwazi ukuwusebenzisa lapha.
* Kukhona isikulufa esincane sombala wesiliva esivimbela i-gooseneck (yenza kube nzima noma kube lula ukujikajika). Ngikukhomba lokhu ngoba uma ufaka isibambo esibheke kwesobunxele, isikulufa siphambili naphakathi nendawo. Uma ufaka isikhungo esibheke isibambo, isikulufa singakwesokudla. Uma ufaka isibambo ngakwesokudla, isikulufu singemuva. Idizayini ibonakala ithatha ukuthi uzofaka ngesibambo ngakwesokudla njengoba igama lomkhiqizo libhekene nawe kuleli cala. Isakhiwo sami sangempela kwakuwukubeka isibambo ngakwesobunxele kepha angikwazi ukubhekana nokubona isikulufu, ngakho-ke ngashintsha ngaba nesibambo maphakathi. Ngicabanga ukuthi ukuba nesikulufa esiphambene nesibambo bekungaba umqondo ongcono ukuze zonke izakhiwo zokubamba zikwazi ukuhlala ngaphandle kwesikulufa esike saba ngaphambili (noma senze isikulufa sibe mnyama). Abanye abantu bangahle bangakhathali kepha kuyanginamathela.
* Iphakethe lifaka ipuleti lamasinki ama-3 hole kepha kusetshenziswa imbobo eyodwa kuphela. Kukhona futhi ama-adaptha ezihlanganisi ezi-1/3 kuya ku-8/1 intshi.
Kukonke, hhayi okuthandwayo noma okuphezulu kompompi bomugqa laphaya, kepha ngicabanga ukuthi uthola inani elihle lentengo.
Ngemuva kokuba ikhanda likasinki elibiza kakhulu lihluleke amasonto ambalwa ukuthola izimpawu zalo ngathenga le nto ngomfutho, bengingalindele okuningi. Ngimangele ukuthi ukwakheka kuqinile, impahla yinhle, futhi yeza nakho KONKE engikudingayo ukukufaka; kwafika neziphenduli zamapayipi zilungele ukuhamba. Isinki eqinile kulokhu engikubonile kuze kube manje, izovuselelwa uma kukhona okungahambi kahle.
Izinto okufanele uzikhumbule lapho uthenga:
-Ayikho into yokuhambisa insipho, ngakho-ke uma ufuna ukuyibhangqa udinga ukuyithola
-Ngikuthengile lokhu kuthengiswa ngemali eshibhile impela, ngakho-ke ukwenyuka kwalesi sinki kususelwa kunani lekhwalithi
-Ukuhamba okuhle kokunyakaza kwekhanda nesibambo, ngakho-ke qiniseka ukuthi ngeke kusondele kakhulu odongeni lwasemuva (Atleast 1 1/2 intshi)
Kade ngangifuna umpompi ofana nalona kodwa bengingenayo imali eyanele yokuwuthenga. "I-WOWOW Faucet" yakho yenziwe kahle ngekhwalithi nemali. Sicela uqhubeke nokuba nesitoko sabantu abanjengami abasesabelomali futhi manje nginepompo enhle kakhulu engizoyisebenzisa isikhathi eside kakhulu. Ngiyabonga futhi ngicela uqhubeke nawo wonke umsebenzi omuhle. Ngiyabonga!
Ngingu-newbie esikhundleni se-DIY ekhishini yekhishi. Bekufanele ngithathe indawo yompompi wakudala wePfister 526 Contempra omise ipayipi lakhe eliqale ukuvuza ngemuva kwekhanda. Angikwazanga ukwenza isinqumo sokuthi ngizoyilungisa noma ngizoyishintsha. Ngangilungise inkinga ehlukile kuyo kanye ngaphambili. Kepha yeka umkhiqizo owakhiwe kabi, owenziwe ngobunjiniyela, futhi ngenxa yalokho umkhiqizo obizayo. Ukulungisa akukaze kubonakale kuyindlela enhle. Ngisho nezingxenye zazibiza. Ufaka okunye, okunye kuzokunikela kuwe (lokho ngubunjiniyela obedlulele nokwakhiwa okungalungile). Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngiyilahlile. Ngibonga ukuncenga kanye nokukhuthazwa okuvela kubangani nomndeni, kanye nesivumelwano sombani esifike ngesikhathi esakhanya ku-WOWOW, ngadubula iWOWOW. Akusoze kwahamba kabi ngompompi omusha obiza imali efanayo njengoba nje iPfister idonsela phansi i-hoso yodwa. Ukwakheka kwayo okulula, okunengqondo, nokuba nazo zonke izesekeli ezifakiwe kwiphakeji kwenze kwaba injabulo enkulu ukufaka. Kunginike ukuzethemba okusha okutholakele ngemuva kokwenza lo msebenzi. Kuyafaneleka. Ake ngibuze, yini enye umuntu ayidingayo ompompi basekhishini nhlobo, lapho bonke becishe babe nezikhalazo ezifanayo.
Ngithenge le ompompi yasekhishini ngemuva kocwaningo oluningi ngibheka amamodeli ahlukahlukene. Ngithanda ukuthi inenkinobho ekhombisa ngokusobala ukuthi iyashisa futhi iyabanda. Abanye ompompi engibabhekile bebengenayo le nto. Ngibe nompayipi wokuyifaka futhi wathi okube nzima kakhulu ukukhipha ompompi wakudala. Ukufaka lokhu kwakulula ngokwendlela yakhe.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sinokugeleza okuhle kokugeleza kwamanzi okuqondile nokubanzi. Isibambo sibushelelezi kakhulu ukusisebenzisa. Ngithanda ukuthi phezulu kompompi kungasuswa futhi kufinyelele kulezo zindawo ezinzima kusinki. Besinompompi wakudala wesikole ngakho-ke lokhu kuyinzuzo enhle kithi manje. Sekukonke, ukuthenga okuhle kakhulu i-IMHO. Siyithengile nge-nickel ebhulashi futhi kulula kakhulu ukuyigcina ihlanzekile ihambisana ne-chrome eyishintshe.
Ngokuya ngokuthandwa sithanda isitayela, i-arc ephezulu, nokujikisa okulula ukusuka kolunye uhlangothi. Ukugeleza okuhle komoya kanye nesifutho esihle. Ngokuqondene nokungathandwa, isikhalazo sami kuphela kungaba yimicu esezingeni eliphansi enantini enamathela ompompi kusinki. Amantongomane abengaguqula uguquko olungu-3/4 kalula futhi okokugcina okungu-1/4 KAKHULU kanzima. Kwakunjalo kuze kube sesikhungweni sosayizi esingu-1/2 ″ ubukhulu kuphela. Akumnandi kumuntu omdala olele ngomhlane ngaphansi kosinki. Ipuleti le-escutcheon limane lamboza izimbobo ezintathu kusinki. I-intshi ende bekuzoba ukuhlanganisa. Uphawu phakathi kompompi nepuleti le-escutcheon (into 2) kubhekiselwa kulo njenge- “gasket”. Empeleni iyindandatho O. Ibhasikidi liyisicaba. Iningi labantu lizokwazi indandatho ye-O lapho liyibona. Kwenza kungadideki kangako njengoba kukhona i-gasket yerabha (iflethi) ehamba ngaphansi kosinki ngenhla kwepuleti lensimbi. Ukuxhumeka kokuphakelwa kwamanzi kuyashesha futhi kulula. Akukho ukuvuza okukodwa.
Yithole! ngeke uzisole !!!!! Kulula ukufaka futhi okushiwoyo encazelweni, imizuzu engama-20 ukukubeka ndawonye, ​​YUP !!!! ngokoqobo kungithathe imizuzu engama-20. Umpompi mude, ngakho-ke ngizoncoma ukuthi umthengi alinganise indawo yakhe b4 ayithenge. Ngiyathanda ukuthi ompompi uyabiza futhi ubukeka ubiza. Ngiyabonga WOWOW ngokubeka ompompi ngenani elifanele !!!!! Okwamanje, angikwazi ukusho lutho olubi ngakho-ke ngincoma le ompompi ngakho-ke yilungiselele!
Ngiyi-skeptic ephelele ngakho ngithenga okuningi futhi ngazama konke okusemandleni ukuthi ngingashiswa. Nginqume ngale mpompi, noma ngabe ezinye izingxenye zami zithe "khokha imali ethe xaxa ukuze uthole ikhwalithi yangempela". Ukuqina kubalulekile kimi - kuze kube seqophelweni. Kuze kube manje ngizizwa sengathi lo mkhiqizo uhanjiswe ngokuphelele, futhi empeleni weqe engikulindele. Umoya wokufaka (yize kungesikho okubalulekile), kepha okuhle kunakho konke kusebenza ngokuphelele: amandla agcwele lapho ufuna, uma ungathandi, thanda isifutho kepha kulula ukusishintsha phakathi kwesifutho nokusakaza. Umyeni wami wayengenaso isiqiniseko sokuthi uyabuthanda ubukeka, kepha manje njengoba sebutholile uyabuthanda kakhulu. Sekukonke kungukuwina okuphelele (kuze kube manje). Sizovuselela uma kukhona okuguqukayo ngokusetshenziswa (ukuqina), kepha amasonto ama-2 angene futhi ngisakuthanda.
Kusukela lapho uvula iphakethe, le ompompi ibonakala ingekhwalithi ephezulu. Kulula ukuyifaka futhi isebenze kahle. Ngisuse umpompi omdala wombuso owawunombhobho ovuzayo wesikhungo yize wawungemdala kakhulu. Ikhwalithi ye-wowow iphakeme kakhulu. Ukwenza le ompompi isebenze kubhavu wensiza owawunemigodi emi-3, ngangidinga i-escutcheon engu-6 (esikhundleni sayo enkulu ababandakanya ukuyifaka ekhishini). Ngithole i-BWE 6 ″ escutcheon ibhalwe kahle i-nickel fit (ezinye eziningi engizithengile azizange zishelele phezu kwe-WOWOW yize amanye ama-escutcheon athi ububanzi bawo bungu-1/3/8 ″). Ngisebenzise i-rasp ku-drill ukwenza umgodi ophakathi ube mkhulu ngokwanele ukufaka i-WOWOW. Ngijabule kakhulu ngazo zombili izinto.
Sisezinhlelweni zokulungisa ikhishi lethu futhi besifuna ompompi abasha kwazise elidala belivuza. Ngemuva kokubukeza amamodeli ahlukahlukene sinqume kulokhu.
Intengo yayiphelele (sasiqasha ngakho-ke sasingafuni ukuchitha imali eningi) usinki wethu wakhishwa njengoba sasiphinda senza iziqongo zethu zokuphikisa ngakho-ke kwakunzima ukuwufaka kanjalo kodwa ngawufaka ngenkathi umyeni wami esebenza .
Asinakho ukuvuza, i-pull down sprayer yinto engiyithandayo entsha lol. Ibukeka njengalezo ezibizayo ezitolo ezinkulu zamabhokisi, inikeze ikhishi lethu ukubukeka kwesimanje nenhle kangangoba ngiyakujabulela ukuchitha isikhathi ekhishini lol. Ngokuqinisekile sizoncoma !!
Lokhu ukuphakama okuphezulu kwesine, donsela phansi umpompi wasekhishini engiwufakile.
Lokhu kungcono kakhulu.
Inokuxhumana okude. Futhi insimbi yokuxhuma esheshayo yensimbi.
Ipayipi lokukhipha lide, linensimbi engagqwali. Futhi inenkinobho yokuphumula abanye ababengenayo. Futhi inezinga lokugeleza eliphakeme kakhulu.